चैत १७, २०७५ बिगुल
महिला मात्रैका लागि खोलिएको टर्कीको सबैभन्दा ठूलो जिम बेड्रिए ह्युल्यले बनाएकी हुन् । त्यसमा महिला मात्रैको स्वामित्व छ र त्यहाँ कर्मचारी पनि महिला मात्रै छन् । त्यसैले, ती जिमहरूले महिलालाई तन्दुरुस्त राख्नुको साथसाथै उनीहरूलाई रोजगारी पनि दिदै आएको छ ।
तर, यसरी लिंग अनुसार फरक–फरक जिम खोल्दा त्यसले महिलालाई सघाउ पुर्याउँछ कि, विभाजनलाई स्थायी बनाउँछ ? भन्ने बहस पनि चलेको छ । कतिले छुट्टै जिम खोल्नु ठीक नभएको तर्क दिएका छन् ।
बिबिसी टर्कीका संवादाता नेयरन एल्डेनले तयार पारेको रिपोर्टअनुसार इस्तानबुलस्थित एउटा पुरातनवादी छिमेक उम्रानियमा रहेको बी–फिट जिमबाहिरको पोस्टरमा भनिएको छ, ‘जिम जानुस्, जिउलाई राम्रो आकारमा ल्याउनुहोस्, खुसीसँग बाँच्नुहोस् ।’ त्यसको साथै सानो हाते अक्षरले ढोलामा लेखिएको छः ‘पुरुषलाई अनुमति छैन ।’ टर्कीमा भएका २ सय २० वटा बी–फिट जिम केन्द्रमध्ये यो एक हो ।
उक्त जिम देशकै सबैभन्दा ठूलो जिमहरूको सञ्जाल हो जसमा झण्डै ६ लाख ५० हजार सदस्यहरू छन् । जिम आउने धेरै महिलाहरू पहिला कहिल्यै जिम नगरेकाहरू छन् र पछिल्ला वर्षहरूमा सबै सदस्यहरूको कुल मिलाएर करिब ६ लाख किलो वजन घटेको छ ।
कसरी बन्यो यसको उपाय ?
बेड्रिए ह्युल्यले सन् २००६ मा कम्पनी स्थापना गरेकी हुन् । उनले अमेरिकामा महिलाका लागि मात्रै भनेर खोलिएको जिम देखेपछि आफूले पनि त्यस्तै जिम टर्कीमा खोलेकी हुन् । उनलाई अमेरिकाको उक्त जिम निकै मनप¥यो र सोचिन्, ‘हामीलाई पनि टर्कीमा यस्तै केहीको खाँचो छ सायद ।’ सुरुमा, मानिसहरूले उनलाई त्यसले काम नगर्ने बताएका थिए । उनीहरूले भनेका थिए, ‘यो सम्भव छैन किनभने टर्कीमा महिलाहरूले व्यायाम गर्दैनन्,’ उनले भनिन् । ‘तर, मैले त्यो दृष्टिकोणबाट हेरिनँ, मैले केवल अवसरको दृष्टिले हेरेँ ।’
‘टर्कीमा धेरै महिलाहरू एक्लिएर बसेका छन् र उनीहरू घरबाहिर जाँदैनन् ‘महिला र खेलमा अनुसन्धान गरेकी बाचिसहिर विश्वविद्यालयकी समाजशास्त्रकी प्राध्यापक निलुफेर नर्लीले भनिन् । ‘उनीहरू धेरै समय टिभी हेरेरै बिताउँछन् । त्यो राम्रो होइन, शारीरिक तन्दुरुस्तीका लागि उनीहरूले केही गरिरहनुपर्छ । स्वास्थ्यका लागि व्यायाम महत्वपूर्ण छ, र व्यक्तिको अभिव्यक्ति र अरू मानिससँगको घुलनमिलनका लागि पनि यो महत्वपूर्ण छ । ‘टर्कीमा आज धेरै महिलाहरूले धार्मिक परम्परागत बाधाहरू झेलिरहेका छन,’ उनले भनिन् ।
सिइद कोचले सदस्यका रूपमा सुरु गरिन् र अहिले उनले तीनवटा जीम किनेकी छन् । ‘म सधैँ खेल र स्वास्थ्यमा रुचि राख्थेँ तर मैले व्यायाम गर्न सकिनँ किनभने, मैले सहज लाग्ने जिम कहिल्यै भेटिनँ । साथै, टर्कीसँग केही समस्या छः पतिले डाहा गर्न सक्छन् र जिमजस्ता ठाउँमा जान आफ्ना पत्नीलाई रोक्न सक्छन् । मेरा पति पनि त्यस्तै हुन्,’ उनले भनिन् । ‘महिलाहरूले यहाँजस्तो मन लाग्यो त्यस्तै लुगा लगाउन सक्छन्, ।’
‘म जस्तो पुरातनवादी सोच भएको महिलालाई यो एकदम महत्वपूर्ण छ । अरू केही छन् जो महिलापुरुषकै लागि खोलिएको जिममा जान्छन् । तर, उनीहरू पुरुषले घुरेर हेरेको मन पराउँदैनन् । केहीले व्यायाम गरिरहँदा आफ्नो जिउ पुरुषलाई देखाउन सहज महसुस नगर्ने भएकोले यहाँ आउँछन् ।’ उनले भनिन् ।
सइद कोचले तीनवटा जीमका फ्र्यान्चाइज सञ्चालन गर्दै आएकी छन् । धेरैजसो जिमभित्र ट्रेडमिल, टेलिभिजन र रोइङ मेसिनहरू छन् र त्यसको बनोट फरक देखिन्छ । खासमा ती कुनै पनि विद्युत्बाट चल्ने होइन । यसले लागत कम गर्न सघाउँछ ।
बरु, फरक–फरक मांसपेशीहरूका लागि काम गर्ने हाइड्रलिक मेसिनहरू वरिपरि गोलो हुने गरी राख्छन् । त्यसको बीचमा बसेर प्रशिक्षकले पालो अनुसार जिम गर्ने महिलालाई प्रशिक्षण दिन्छन् । केही सदस्यहरूले आफ्ना सन्तानलाई समेत त्यहाँ ल्याउँछन् । उनीहरूलाई समय बिताउनका लागि त्यहाँ किताबहरू र खेलौनाहरूसमेत राखिएको छ । आफ्ना सदस्यहरूलाई नजिकबाट नियाल्ने कोचले महिलालाई नियमित आउन समस्या हुन सक्ने बताइन् ।
‘हामीले कसैलाई लगातार तीन दिनसम्म आएको देखेनौँ भने कहाँ हुनुहुन्छ ? किन नआउनु भएको ? भनी फोन गर्छौं ।’ ‘मलाई पनि उनीहरूले फोन गर्ने गर्थे र मलाई मनपथ्र्यो मेरो बारेमा उनीहरूले सोचिरहेका छन् भनेर ।’ तर, सबैजना भने महिला मात्रैलाई लक्षित गरिएको जिमको पक्षमा छैनन् ।
महिला अधिकार कर्मी एवं चिकित्सक गुल्सुम कभ महिला पुरुषका लागि छुट्टै हुने जिमले उल्टै असर गर्न सक्ने ठान्छिन् । ‘यसले महिलालाई समाजबाट पृथक बनाउँछ,’ उनले भनिन्, ‘महिला भएकाले हामी यस्तै खालका महिला मात्रैको किनमेल केन्द्र, सार्वजनिक यातायात जस्ता छुट्टै व्यवस्थाको विरोध गर्छौं ।’
‘महिलाले पनि पुरुषहरूले नै जिम गर्ने ठाउँमा असहज वा दुव्र्यवहार महसुस नगरी व्यायाम गर्न सक्नुपर्छ । हामीले जब पुरुषलाई अलग गर्छौं तब हामीले पुरुषको व्यवहार सुधार्न सक्दैनौं । हामीले बरु उनीहरूलाई दव्र्यवहार गर्न मद्दत गरिरहेका हुन सक्छौँ । त्यसैले, मलाई यो खतरनाक लाग्छ ।’ गुल्सुम कभलाई महिला र पुरुषले स्वतन्त्र रूपमा सँगै व्यायाम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
मैले एउटा आइतबार पार्कमा केही मानिसलाई सोध्दा उनीहरूले कभको धारणामा सहमति जनाएका छन् । ‘यो किन महिला मात्रैका लागि हुनुपर्छ ? पुरुषहरूले तिमीलाई खाँदैनन्, ?’ एक महिलाले हाँस्दै भनिन् । ‘हामी सबै मानव हौँ । र जिम पनि मिश्रित हुनुपर्छ ।’
तर, बेड्रिया ह्युल्य आफूले महिलाहरूलाई व्यायामका माध्यमबाट सशक्तीकरण गर्न मद्दत गरिरहेको विश्वास गर्छिन् । ‘जब महिलाले कुनै काम विशुद्ध आफ्ना लागि, आफ्नो स्वास्थ्यका लागि, आफ्नो शरीरका लागि गर्न थाल्छिन् । तब उनले फरक दृष्टिकोणबाट हेर्न थाल्छिन् । उनी पहिलाकै जस्तो फेरि कहिल्यै हुने छैनन् ।’
यो मनोभाव बेंगु टेन्यालले पनि अभिव्यक्त गरेकी छन् जो ३९ वर्षकी हुन् र तीन वर्षदेखि सदस्य रहँदै आएकी छन् । ‘म धेरै खुसी छु र महिलाको खुसी भनेको परिवारको खुसी हो,’ उनले भनिन् । ‘कुनै बेला म नाँच्दै घर जान्छु र मेरो छोरीले भन्छिन्, ‘आमा, अरू आमाहरू घरमा आउँछन् तर हाँस्दैनन् । तर, तपाईं आउनुहुन्छ र मसँगै नाँच्नुहुन्छ !’
प्रकाशित : आइतबार, चैत १७, २०७५१०:१६